Qar-iska-tuurka Kenya oo kacdoon uu kasoo socdo | Xaysimo
Home War Qar-iska-tuurka Kenya oo kacdoon uu kasoo socdo
Qar-iska-tuurka Kenya oo kacdoon uu kasoo socdo
Muddo dheer oo uu jiray loollan baddeed oo gaadhay maxkamadda aduunka iyo weliba golayaasha fadhiyada waddamada caalamka intooda badan, waxaa hadda aad mooddaa In hawshii oo dhammi soo idlaatay, iyadoo ay go’aan qaadashada maxakamaddu ka hadhsantahay muddo kooban.
Filashada natiijada iyo weliba sida ay wax u socdaan ayaa u eeg In maxkamaddu ay go’aamin doonto kiiskan iyada oo dib uugu celinaysa lahaanshiyaha badda soomaaliya oo muran laga geliyay.
Kenya waxaa fajac ku ah hankii sheegashada badda oo si yar faraheeda uuga baxay, waxaa kaga burburaya hishiisyo badan oo ahaa shidaal baadhis kuwaas oo ay hore uula saxiixatay shirkado caalami ah, waxaa guud ahaan waxba-kama-jiraan noqday qorshayaal mashaariiceed ee ay kenya baddaas kaga xisaabtamaysay.
Dhanka kale waxaa daciifaya xidhiidhkii kenya iyo waddamo badan, waxa kale oo adkaanaysa si caadi ah kiisaskii kenya ay hor-gayn lahayd maxkammadda adduunka mar uun haddii wax ku soo kordhaan kenya, sababtoo ah Kenya waxaa si cad u qabanaya ku xad-gudbidda dhul aysan lahyn iyo weliba kenya oo fel-celinteedu noqon doonto mid qallafsan. Waana tan adkayndoonto xidhiidhka Maxkamadda adduunka iyo kenya.
Waxaa iyana meesha soo gelaya in kenya ay ka bur-buraan heshiisyadii shidaalka iyo weliba maal-gashiyo ay hawlaheedu ka socdaan gudaha kenya hadda, dhammaan howlahan maal-gashi ee ka socda gudaha kenya waxa ay noqonayaan kuwo dusha ka saaran kenya.
Fashilka iyo jabka ka soo gaadha kiiskan kenya, waxa gudaha waddanka ka dhalan-doona kacdoon siyaasaddeed oo culus, kaas oo ay macquul tahay ugu yaraan in uu Meesha ka saaro xukuumaddan hadda talada haysa, waayo dadka waddanka Kenya oo muddoba dhegtu taagnayd oo dawladdan uba arka in dhulkii ay sheeganaysay qayb-qayb loo kala qaatay, waxa ay dadkaasi ku jawaabi-doonnaan kacdoonno siyaasaddeed oo waddankaasi uu galo. Tanna waxaa tusaale u ah howlaha socda iyo sida ay shacabka dhegtu uugu taagantahay.
Habkan layaabka iyo amakaaga ku ah maxkamadda adduunka ee ay samaynayso kenya, waa halka waddo ee ay doonayso kenya in ay shacabkeeda ku degto maskaxdooda iyada oo muujinaysa in aysan marnaba raalli ka ahayn kiiska badda, waayo kenya waxay u jeeddaa jawaabta kaga imanaysa shacabkeeda, mana jirto naxariis u dhexaysa shacabka iyo dawladda kenya.
Shacabka kenya oo ogsoon in dawladdoodu horre been uugu sheegtay iyo weliba sida dawladdan intii ay jirtay dhulkii kenya ee Waddamada kale ay muran u galeen. Dhulkaas oo ay ka midyihiin kan ay ku maransanyihiin “ kenya iyo Uganda iyo Kenya iyo Tanzania” marnaba shacabku ma yeeli-doonnaan natiijada la filaayo ee ah in dhulkaas loo xukminaayo Soomaliyadii hore u lahayd.
Dhinaca kale kenya Waxay ku dhacaysaa ceeb-siyaasaddeed taas oo ah khibradda aan lahayn ka fiirsashada iyo beenta ku dheehan ee ka halleelay kiiska badda soomaaliya, waana tallaabada keenaysa in ay kenya ka baxdo go’aanka maxkamadda ka hor inta aan lugu dhawaaqin natiijada, waana “Guul-darradu inta aysan ku halleelin ka bax garoonka”, balse xeerka maxkamadda oo ah mid hore loo saxiixay in uusan ka laaban-karin waddan ayaa diidaya wax kasta oo ay kenya samaynlahayd maanta.
Dhammaan Gal-galashada kenya waxa ay u tahay hal natiijo oo ay dadkeeda beer-laxawsi kaga doonayso, balse arrinku uu noqon doono mid aysan shacabkaasi marnaba ka tanaasulin.
XIDHIIDHKA KENYA IYO SOOMAALIYA
Dhanka kale go’aan gaadhista natiijadaas waxa ay sababaysaa in uu adkaado cilaaqadka labada waddan ee ay wadaaggaan xadka, tan oo ka imanaysa labada dhinacba.
Soomaaliya waxa ay qorshaynaysaa hannaan dhammaystiran oo ay ciidamada Kenya ee ka midka ah midowga Africa ee nabad illaalinta u jooga soomaliya in ay ka saarto gudaha waddanka iyada oo adeegsanaysa xeer sharciyadaysan kaas oo soomaaliya ka illaalinaya in ay ku xad-gudubto qaar ka mid ah xeerrarkii u yaallay iyaga iyo ciidamada ka jooga africa soomaaliya.
Waxaa macquul noqon-doona in labada waddan ay galaan saxmad-siyaasaddeed, waxaana meesha aan ka maqnayn in xadka u dhexeeya labada dal uu noqdoono mid ka duwan sidiisii hore.
W/Q: Cumar Rodol